घाँसबाट बुढा - कपडाले लुगा लगाउने लसुन
"घाँस" - यो 100% भिसेज बाट बनाइएको फंतासी यार्नको नाम हो। यो नामको फलामको ढोका बनाइएको फ्लाइङ स्ट्रिङको लागी धन्यवाद, जसको थ्रेड बीचमा फरक मोटाईको विला को टुक्रा राखिएको छ। किनारको भाँडा धेरै विविध हुन्छन् - गुट, आदि संग धेरै पतली, चौडाई, चमकदार, आदि। फूलहरु को इंद्रधनुषको रंगान्तरण संग "घाँस" मोनोक्रोम, दो-रङ र बहु रङ छन्। यो यार्न डिजाइन, मुख्य रूप देखि, सुई या कर्सेटिंगिंग बुनाई मा बुनाई को लागि डिजाइन गरिएको छ। घाँसबाट बुनाई मूल र सुन्दर चीजहरू सिर्जना गर्न छिटो मार्ग हो। यसको केवल खतरा भनेको यो धेरै फैलिएको छ, र यो काम गर्दा खातामा लिइन्छ। छोराछोरीको घाँसबाट बुबालाई सुन्दर बनाइन्छ। कृत्रिम फरबाट बनाइएको उनको बुना झरनाबाट, वसन्त लन जस्तो मूल कुराहरू, साथै खेलका लागि राम्रो "फर" जनावरहरू। धागेको शानदार बनावटले तपाईंलाई चीजहरू प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ जुन बच्चाहरु लाई विशेष गरी प्यारा र छाउनी देख्दछ, यो र यस प्रकारको विभिन्न रंगहरु लाई योगदान गर्दछ - नाजुक पसेलबाट, उज्ज्वल र रसदार टोनबाट।
महिलाहरु को लागि बुना भयो कपडा मा, "घास" को प्रायः व्यक्तिगत भागहरु - कलर, कफ, जेब मा वाल्व बुनाई को लागि प्रयोग गरिन्छ। यार्नको "कठोरता" र अत्यधिक नरमताको कारण, यसको उत्पादनले पुरा तरिकाले आकार र छिटो खिच्न सक्दैन। यसैले, यो अन्य प्रकार को धागे संग "घाँस" बाट बुनाई को संयोजन गर्न सिफारिस गरिन्छ। उदाहरणका लागि, कोट, "घाँस" र साधारण ऊनबाट जोडिएको स्ट्रिप्सको संयोजनमा : "घाँस", एक पट्टी ऊनी, धेरै प्रभावकारी देखिन्छ। काल्पनिक यार्नले उत्पादनलाई उज्ज्वल सजावटी र असामान्य दिनेछ, र ऊनका पट्टीहरूले यसको आकारमा राख्न मद्दत गर्नेछ। राम्रो मोडेल प्राप्त गरिन्छ, जहाँ एक कोकलेट "घाँस" बाट बनाइएको छ, र अलमारियों र पछाडिको तल, र पनि आस्तीन साधारण चिकनी धागा बनाइन्छ।
"घाँस" बाट टोपी र स्कार्फहरू, सबै प्रकारका कुखुराहरू, साथसाथै पोन्को र शलहरूलाई निको पार्न धेरै राम्रो हुन्छ। एक सानो टोपी को "घाँस" देखि बुनाई, टाउको मा कटौती को रूप मा, को रूप मा अतिरिक्त बलियो बनाउन को आवश्यकता छैन, यो किनारा संग एक बढी तंग किनारा बनाउन पर्याप्त छ। सानो क्षेत्रहरु संग बकेट र टोपी पनि एकदम प्रभावशाली दिखता छ, तर यो इच्छित आकार प्राप्त गर्न को लागि एक डेंसर आधार संग नकल गर्न को लागी वांछनीय छ। यदि तपाईं उत्पादन अधिक घनत्व चाहानुहुन्छ भने, यो यसलाई क्रसटेट गर्न राम्रो छ, किनभने "घाँस" बाट सुई बुनाई धेरै "ढीला" हुन्छ।
उदाहरणको लागि, स्कार्फ-च्यान्रेले टाई गर्ने प्रयास गर्नुहोस् । तपाईलाई "घाँस" उज्ज्वल नारंगी र सेतो फूल र सुन्तला ऊन धागे नारंगी चाहिन्छ। Shirokik बुट र क्रसट। पहिलो, सर्कल वरिपरि चिकनी ऊनको कर्सेट एक कोणको रूपमा ट्राइङ्गुलर मलजलसँग बाँधिएको छ, प्रत्येक दोस्रो पङ्क्ति2loops प्रत्येकमा थप। Chanterelle को "शरीर" बुढा सुई संग सिरे बुनाई संग दुई सीधा मा नारंगी "घाँस" देखि बुनाई छ। आवश्यक लम्बाइ जोड्नु, एक थ्रेड काटिएको छ र एक सेतो धागा थपिएको छ। लूप्सको संख्या बिस्तारै कम हुन्छ, दुई अनुहारमा बाँच्ने दुई अनुहार चप्पल अगाडि अगाडि दुई ढिलो हुन्छन्। बाहिरी3छोरोहरू सँगसँगै बाँधिएका छन्। अलग-अलग कलमहरू र "शरीर" chanterelles मा सिलाई। पूरै भेद गर्न, केवल हिंडको खुट्टाको अनुलग्नक बिन्दुको तल, शरीर थ्रेडको साथ कडा हुन्छ। त्यसपछि कक्रेट कानहरू, उनीहरूलाई मस्तिष्कमा डुबाउँछन् र शरीरमा चकलेट जोड्छन्। मस्तिष्कमा दुई कालो मोतीको आँखाहरू छन् र काली कपाल नाकको पोल तिरस्कार गर्छन्। स्कार्फ तयार छ।
अन्तमा, धेरै सुन्दर ढंगले सजावटी वस्तुहरू प्राप्त गरेको छ, यस फंतासी यार्न संग सम्बन्धित। "घाँस" बाट बुना भयो बेडरूमको साँचो सजावट, साथसाथै मोनोफोनिक यार्नको बनाइएको रंगीन सजावटी कुशनहरू वा विभिन्न रंगका "घाँस" को एक etched रंगीन आभूषण संग। अधिक अनुभवी र साहसी शिल्पकारहरूलाई एक धागेबाट एक पफ वा कुर्सीमा धागा बाँध्न सल्लाह दिइन्छ।
अनुहारको सासहरू आफ्नै हातले
सुझावहरू: कसरी कत्तिको बाँध्न सजिलो हुन्छ?
गुलाब: मोतीको एक ढाँचा। मोतीबाट गुलाबको बुनाई: एक मास्टर वर्ग
Tilda हियर एक स्टाइलिश, आरामदायक र सदावहार फैशनेबल खिलौना हो
एक नोटप्याडको लागि कागज, कपडा वा छाला बनाइएको तपाईंको हातले ढाक्नुहोस्
Clans को झडप: शुरुआती लागि प्रशिक्षण। Clans को झडप मा पङ्क्तिबद्ध आधार
कर्मचारीहरु प्रतिक्रिया: सुपरमार्केट "Crossroads" को रूसी श्रृंखला
कति को एपिसोड "मेरो जीवन हो" प्रेम कहानी विकास
किन मासिक जाने र के गर्न
कसरी वा, "दुवै", "वालपेपर" "दुवै" "दुवै" वा "OBI" गर्न?
कुंभ-मीन-महिला र पुरुष को ठूलो अनुकूलता के?
मीठो "आलु" - मेरो बाल्यकाल देखि एक स्वादिष्ट केक नुस्खा
सपना व्याख्या। किन हात्ती बारेमा सपना
अरब वसन्त: कारणहरू र नतिजा
कसरी लोक उपचार प्रयोग गरेर अग्न्याशय व्यवहार गर्न